Madaxweyne Xasan oo kormeeray Imtixaanka mideysan ee wasaaradda Waxbrashada – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Xasan oo kormeeray Imtixaanka mideysan ee wasaaradda Waxbrashada
A warsame 18 June 2015
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku ammaaney Wasaaradda Waxbarashada hirgelinta imtixaanka mideysan ee shahaaddada dugsiga sare oo si habsami leh uga socda magaalada Muqdisho.
“Waa bilow fiican, waxaana rajeynayaa in mustaqbalka ay wasaaradda ku guuleysato inay si habsami leh u maareyso imtixaanaadka heerka qaran oo dhan” ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa intii uu kormeerka ku jirey waxaa uu warbixin ku saabsan qaabka uu imtixaanka u socdo ka dhegeystey Wasiirka Waxbarashada Khadra Bashiir Cali.
Imtixaanka ayaa lasoo afjarayaa berri oo Jimce ah, iyadoo ardaydu gelayaan labo maaddo oo dhiman kuwaasoo kala ah: Physics iyo Tarbiyada Islaamka.
Waa markii ugu horeysay muddo 25 sano ah oo ay dowladdu qaado Imtixaanka mideysan ee Shahaadiga Dugsiga Sare, iyadoo sanadkan ay u fariisteen illaa 7-kun oo arday.
Madaxweynaha Kenya oo amray in xayiraadda laga qaado xawaaladaha Soomaalida